Wasiirada laga xan-qarsado - Raga nimoy nin kaagii nacas nimo maxaa baday by Abdi Mustafe‏
Wasiirada laga xan-qarsado - Raga nimoy nin kaagii nacas nimo maxaa baday by Abdi Mustafe‏ 0 July 10, 2015 in Articles by somalilandlive Staff Visits: 829
Wasiirada laga xan-qarsado - Raga nimoy nin kaagii nacas nimo maxaa baday by Abdi Mustafe‏ Xukuumadii
Siyaad Barre rag badan baa lagu bartay oon cidi dib wax u weydiinin. Xukuumada Silaanyo na sidii si leeg baa wasiiro fara badan lagu kala bartay oo gumoobay oon hadhow cidi la sheekeysan doonin hadii inta goori
goor tahay aanay is daahirin. Wasiirada aad looga xan-qarsado sadexda nin ee uugu horeeyaa waa wasiirka madaxtooyada Xirsi Xaaji Cali, wasiirka arimaha dibada Mohamed Biixi Yonis iyo wasiirka arimaha gudaha Cali Warancade. Xirsi isagu ma liito mana ragga nimo dara ee wuxuu ka gudbi kari waayay talada dhiigshiil oon ogolayn in uu dacal baneeyo oo Xirsi oo cadho qanjaha jooga ayaa hadan xeerkii reerku soo xidhay hadii se uu sidan ku sii socdo waxa dhici toonta isaga oo ooda jebiya oo ingiriiska ka soo jeesta. Sababta Xirsi looga xan-qarsadana waxa iska le
Baashe Morgan oo geeska geliyey. Hadaba labadan wasiir ee kale ee aan naftooda uuga tudhin tumashada lagu dul soconayo iyo istic maalka la istic maalayo iyadoon hadana laga xan qarsado ayaa midkoodna wuu xil jecelyey oo waa ina Warancade midkoodna wuu faan jeclyay oo wasiir nimada ayuu ku faanaa. Labaduba way is bahdalaan oo madaxtooyada waxba kama aha labadaba dhowr jeer waxa ku dhacday in loo diido inay arkaan madaxweynaha. Lax waliba shilal-kay is dhigto ayaa lagu qalaa. Madaxtooyadu waxay ogaatay in aan labadaa wasiir damiir lahayn oo la adeegsan karo. Xirsi iyo Mohamed Biixi iyo Cali Warancade waxaan leeyey meel aan la idinka jeclayn indhaha lalama sii raaco ee ragga nimo darada
yaraysta oo naftiina uuga tudha bahdilaada oo bulshada u sheega in aan madaxweynuhu talinin oo is maydha isna daahiriya.
KALA DOORASHADAYDII XISBIYADDA QARRANKA: Dr. Abdinasir Ismail Nour
26/03/2017 - 09:44:46